Shanda Visa |
Shanda ugare kunze kwenyika
Yakasarudzwa kubva kuKurikusheni Kunokurumidza Kurarama Pasi Pano!
Iwe Unoda kutanga Hupenyu huri nani here?
Nyika Dzakanakisa Kuparadza Kune Zvakaitika Kufamba
Product Category zvose Kutsvaga Jobho vhiza
Wedzera Extra CV kuDubai City Company
Wedzera Extra CV - Iri neshumiro, iwe uchave nemukana wekuisa yako yakagadziriswa CV nekuwedzera kune iyo visa vhoti yenzvimbo yako yakasarudzwa. Iyi sevhisi inonyanya kugadzirirwa vashandisi veMiddle East. Nekudaro, isu tiri kupa zano expats yekuwedzera sevhisi ino yeAUE, Qatar, Kuwait neSaudi Arabia.
Visa kuenda kuUSA, Unogona ikozvino kubhuka mukana wako wehupenyu hutsva muUnited States of America. Kambani yedu ichakubatsira iwe kutanga kushanda uye kugara muUS Iri basa rinosanganisira a basa mukati mezuva re60 + Mari Kudzoserwa Guarantee!. Zvakare, sevhisi iyi yakanaka kwazvo kubata nema expats.
Visa kuenda kuSaudi Arabia inoshamisa nzvimbo ye expats muMiddle East. Iwe unogona kusvika ikoko ne visa kubva kuDubai City Company. Iwe une mararamiro ekuMiddle East. Usatambisa nguva yako kune vasiri ma visa ekuipa uye tanga neDubai City Company !. Tauya kuzokubatsira.
Sei Tida Saudi Arabia uye Iwe Unofanirawo Kuita? Pakati peMabvazuva, iwe unogona kuwana iwe pachako hupenyu hutsva! kana uchinetseka kuti pane imwe nzira yeku usvike kuAU paZororo kana kunyange wkufamba nguva yakazara. Tora a Visa sezvo iwe uchigona kuve nemukana unoshamisa nekambani yedu.
Visa kuenda Qatar - Isu tese tinoda mararamiro eQatari! Kutsvaga basa mukati mezuva re60 + Mari Kudzoserwa Guarantee! Anenge chero munhu anogona kunyorera kubasa muQatar. kana uchinetseka kuti pane imwe nzira yekutamira kuQatar .. Isu tiri mhinduro yako! Boka redu revanyanzvi richaisa iwe ipapo. Ehe, iwe unofanirwa kubhadhara kamwe chete kune zvese zvinodiwa gwaro. Sangano redu chinangwa ndechekukubatsira iwe kusvika Qatar, kukubatanidza iwe neRenja maneja uye ipa Visa + yekugara + Shanda mu Middle East. Vakuru vedu mamaneja vanogara vachiita chokwadi chekuti unosvika ipapo nenguva uye rutsigiro ruzere ruchapihwa kudivi redu.
Tora Visa kuCanada! neDubai City Kambani. Isu tiri No.1 kutamira mutengesi muUnited Arab Emirates. Boka redu revanyanzvi kubva 2009 ichibatsira expats uye vashandi vepasi rese kutamira kuNorth America.
Paunosvika ikoko uine vhiza kubva kuDubai City Company. Iwe une Emirates! Usatambisa nguva yako kune vanopa vheti vhezheni uye tanga neDubai City Company !.
Nei Ndichida Dubai uye Unofanira Kuitazve? Zviitire hupenyu hutsva! kana uchinetseka kuti pane imwe nzira yeku kusvika kune UAE seZororo Kushanda kwedu Visa iwe unogona kuve nemukana unoshamisa nekambani yedu.
Tora mukana wako ku kuhwina Visa kuDubai!!
Vanenge munhu wese anogona kunyorera kuDubai Visa Lottery! Pane izvo zviviri chete zvinodiwa kuti munhu akwanise kuwana UAE Visa Basa: Shandisa iyo Dubai Visa Lottery kuti uwane kunze kwekungobaya mashoma kana iwe uchikwanisa basa reVisa. Chero expatance yekune dzimwe nyika, asiri UAE yenyika, inoda visa rekugara kuti ugare uye ushande muDubai. Nerotari yedu, iwe uchahwina iyo Kugara zvakare / Basa rekuona rinokutendera kuti ushande muDubai!
Mitemo yedu yepamba mumba:
Mune mimwe mitambo pamushandisi
Vanyengeri vachave vasina kukodzera.